အောင်မြင်သူ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: အောင်မြင်သူ
Approaching Nirvana (5)
Posted on April 12, 2015 by chitnge
Approaching Nirvana (5) Nirvana might beanew term for all strong Buddhists. So also, the way to Nirvana will beanew approach for all strong Buddhists. Only Buddhists are trying to enter into Nirvana by sacrificing self-egocentric sexual … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, English Posts, human right, Magga Nyanna, Nibbana, Vipassana, တဏှာ, မဂ်, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, အောင်မြင်သူ	| Leaveacomment
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -18
Posted on June 12, 2011 by chitnge
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အခန်း(၁၃) ( ဒေါက်တာချစ်ငယ် ၏ ငယ်မူ ကလောင်ခွဲ လက်ရာများ ) အရာရာ၏ သော့ချက် အရာရာ၌ သော့ချက်ရှိသည်။ သော့ချက်ကို သိလျှင် လွယ်သည်။ သော့ချက်ကို မသိလျှင် ခက်သည်။ သော့ချက်မှာ အကြောင်းအကျိုးတရားပင် ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် အဖိုးတန်လိုကြပေမည်။ တန်ဖိုးရှိသူ ဖြစ်ချင်ကြပေလိမ့်မည်။ ယင်းဆန္ဒသည် ကောင်းမွန်လှပါသည်။ သို့သော် တန်ဖိုးရှိသူ ဖြစ်အောင် အကြောင်းခံရပေမည်။ တန်ဖိုးရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်ချင်ရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်ပေ။ တန်ဖိုးရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရန် လုံလောက်သော … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာကောင်း, သာသနာ, အတ္တ, သော့ချက်, အောင်မြင်သူ	| Leaveacomment